नेकपा हाइकमाण्ड बैठक बस्दै, प्रचण्डलाई बहुमत आउने निश्चित भएपछि यस्तो छ ओली समुहको तयारी — Sanchar Kendra
नेकपा हाइकमाण्ड बैठक बस्दै, प्रचण्डलाई बहुमत आउने निश्चित भएपछि यस्तो छ ओली समुहको तयारी
काठमाडौँ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सचिलय बैठक आज बस्दै छ। पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा दिउँसो १ बजे बस्ने बैठकमा ओली र प्रचण्डका प्रस्वेतावमा छलफल हुनेछ ।
यसअतिरिक्त दुवैतर्फबाट गरिएका पत्राचारको कार्यसूचीमा सदस्यहरूले धारणा राख्नेछन् । तर, आजको बैठकमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी अध्यक्ष ओली समूहले अल्पमतमै परे पनि प्रतिवेदनमार्फत राखेको अडानबाट पछि नहट्ने तयारी गरेको छ ।
उक्त छलफलले दुई अध्यक्षका अहिलेका अलगअलग प्रस्तावलाई साझा बनाउने गरीको पहल गर्ने तर सहमति नबने स्थायी कमिटी हुँदै केन्द्रीय कमिटीमा लगेर निर्णय गराउने तयारी भएको स्रोतको दाबी छ । त्यसअघि गत शनिबार बसेको सचिवालय बैठकमा ओलीले ३८ पृष्ठको जवाफी प्रतिवेदन पेस गरेपछि नेकपामा दुई वटा प्रस्तावले औपचारिकता पाएका छन्।
त्यसअघि कात्तिक २८ को सचिवालय बैठकमा कार्यकारी अध्यक्ष दाहालले ओलीलाई जवाफी पत्रसहित १९ पृष्ठको प्रस्ताव पेस गरेका थिए। अध्यक्षद्वयबीच मतभेद बढेपछि बैठक माग गर्दै पाँच सचिवालय सदस्यले कात्तिक २५ गते ओलीलाई पत्र लेखेपछि नेकपाभित्र ‘पत्र युद्ध’ सुरू भएको थियो ।
पार्टी र सरकार सञ्चालनमा भइरहेका असन्तुष्टिबाट सुरू भएको नेकपाको विवाद विभिन्न नियुक्ति र राजनीतिक चलखेलपछि फुट नजिक पुगेको छ । दाहालले अनौपचारिक रूपमा पार्टी विभाजन गरेको ओलीले आरोप लगाएका छन् भने दाहालले पनि ओलीलाई पार्टी विभाजनको ‘नाइके’को संज्ञा दिइ सकेका छन् ।
प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो सरकार ढाल्न पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सरकार ढाल्ने खेलमा लागेको बताएका छन् । अहिले पनि प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावको लागि सांसदहरुलाई खाली कागजमा सही गराइएको उनले बताएका छन् ।
शनिबारको सचिवालय बैठकमा जवाफी प्रस्ताव पेस गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अविश्वासको प्रस्तावका लागि भनेर हस्ताक्षर गराउँदा प्रश्न उठाउन सक्ने भन्दै विभिन्न विकास आयोजनाका लागि सरकारसँग माग गर्ने बहानामा सांसदहरुलाई खाली कागजमा सही गराइएको बताएका हुन् ।
ओलीले स्थानीय निर्वाचनमा दाहालले आफ्नै छोरीलाई जिताउन मतपत्र च्यात्नु पर्ने लज्जास्पद उपायको साहारा लिनु पर्ने ठाउँमा पुर्‍याएको प्रसंग पनि जवाफि प्रस्तावमा जोडेका छन् ।
‘स्थानीय चुनावमा सारा घेराबन्दीलाई तोड्दै नेकपा (एमाले) पहिलो शक्तिका रुपमा उदायो । दोस्रो संविधानसभामा कमजोर बनेको जातीय–क्षेत्रीय अतिवाद स्थानीय चुनावसम्म आइपुग्दा लगभग निस्तेज भयो । अवस्था यस्तो भयो कि, आफ्नै छोरीलाई जिताउन मतपत्र च्यात्ने लज्जास्पद उपायको सहारा लिनु पर्ने ठाउँमा तपाईंलाई पुर्‍यायो । तपाईंका अगाडि एउटा गम्भीर प्रश्न उभियो, नेपाली काङ्ग्रेससँगको गठबन्धनमा गाँसिदै अन्ततः विलयनको बाटोमा जाने कि नयाँ राजनीतिक सम्भावनाको खोजी गर्ने । ठिक यही बिन्दुमा हो, दुई पार्टीबीच चुनावी गठबन्धन गर्ने निष्कर्षमा हामी पुगेको । मैले कहिल्यै पनि तपाईंलाई सोधेको छैन– कमरेड, आफैं सम्मिलित गठबन्धनको मुख्य पार्टीलाई थाहै नदिई, एक किसिमले छापामार शैलीमा, विपक्षी पार्टीसँग चुनावी तालमेल गर्दा भोलि उठ्नसक्ने नैतिकताका प्रश्नले तपाईंलाई अलिकति पनि छोएन ?’
जवाफी प्रस्तावको ८ नम्बर बुँदामा ओलीले भनेका छन्, ‘म आज पनि यो प्रश्न सोध्दिनँ, किनभने यो राम्रो कामको लागि तपाईंले लिएको जोखिम हो भनेर मैले अनुमान गरेँ । तर जब आज पनि तपाईं, सिधै प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावका लागि भनेर हस्ताक्षर गराउँदा साथीहरुले प्रश्न उठाउलान् भनेर, विभिन्न विकास आयोजनाका लागि सरकारसँग माग गर्ने बहानामा सांसदहरुलाई खाली कागजमा सही गराउँदै हुनुहुन्छ, गम्भीर नैतिक प्रश्न त उठ्छ नै ।’
ओलीले दाहाललाई अपारदर्शिता र छलछाम किन गरेको भनेर प्रश्न गरेका छन् । प्रस्तावको ९ नम्बर बुँदामा ओलीले भनेका छन्, ‘कामरेड ‘प्रचण्ड’, किन यस्तो अपारदर्शिता ? किन यस्तो छलछाम ? राजनीतिमा सहमत हुन पाइन्छ, असहमत हुन पनि पाइन्छ । भएको पार्टी विघटन गर्न र नयाँ पार्टी बनाउन पनि पाइन्छ । भएकै कुनै पार्टीमा जोडिन पाइन्छ । तपाईं आफै यस्ता कुरालाई स्वाभाविक र आफ्नो नियमित अभ्यास भन्ने गर्नुहुन्छ । ‘भत्काउने– बनाउने– फेरि भत्काउने‘ यस्तो विषयलाई गर्वको विषय बताउनु हुन्छ । अझ थप, दिक्क लाग्यो भने, राजनीति छाड्न पनि पाइन्छ । विश्राम लिन पनि पाइन्छ । तर लोकतन्त्रमा पारदर्शिता र नैतिकता ठूलो विषय हो । युद्धका बेला काम लागेका विधिहरु शान्तिपूर्ण, लोकतान्त्रिक र खुल्ला समाजमा सधैभरि काम लाग्दैनन् । मेरो प्रश्न तपाईंले लिन खोजेको बाटोप्रति होइन, ती कामलाई ‘सहमति’ को आवरणमा गर्नुभएको दोहोरो मापदण्ड र बहानाबाजीका हकमा हो ।’
दाहालले पेस गरेको प्रस्तावलाई सचिवालयबाट खारेज गर्न पनि ओलीले सचिवालयका सबै सदस्यलाई आग्रह गर्दै उनले भदौ २६ को निर्णयमा फर्किन पनि प्रस्ताव गरेका छन् ।
प्रस्तावको अन्तिममा ओलीले भनेका छन्, ‘मैले मेराविरुद्ध कमरेड पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले लगाउनु भएका आरोपहरुको खण्डन गरेको छु, तिनलाई अस्वीकार गरेको छु । म कमरेडहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, पार्टीमा विग्रह निम्त्याउने कथित प्रस्ताव सचिवालय बैठकबाट खारेज गरौँ र पार्टीलाई २०७७ भदौ २६ गते स्थायी कमिटीले निर्माण गरेको सहज अवस्थामा फर्काऔँ ।’
ओलीले महाधिवेशन आयोजना गरी नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने मुख्य अभिभारा भएका अन्तरिम कमिटीहरुलाई अल्पमत र बहुमतको खेल खेल्ने थलो नबनाउन पनि आग्रह गरेका छन् ।
‘कुनै पनि महाधिवेशन/अधिवेशनहरुबाट निर्वाचित नभएका, महाधिवेशनसम्मको सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थाका लागि भनेर बनाइएका र सहजतापूर्वक महाधिवेशन आयोजना गरी नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने मुख्य अभिभारा भएका अन्तरिम कमिटीहरुलाई अल्पमत र बहुमतको खेल खेल्ने थलो नबनाऔं । हाम्रो विधान र नियमावली पनि अधिवेशनसम्म हामीलाई मार्गदर्शन गर्न बनाइएका अन्तरिम प्रबन्धहरु हुन्,’ ओलीको जवाफी प्रस्तावमा छ, ‘तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी–केन्द्र) का दुई अध्यक्षले सहमतिका साथ अघि बढ्ने प्रतिबद्धता र एकीकरणका सम्पूर्ण काम सम्पन्न गर्न एकता महाधिवेशन गर्ने प्रयोजनका लागि सहमतिका साथ र मनोनयनका आधारमा बनाइएका यी कमिटीहरुलाई महाधिवेशन/अधिवेशन आयोजना गर्ने मुख्य उद्देश्यबाट बरालिन नदिऊँ । तीन महिनाभित्र सक्ने भनिएको सङ्गठनात्मक एकीकरणको काम सम्पन्न गर्ने काममा केन्द्रित बनौँ । विचार, विधि, सङ्गठन र नेतृत्वको प्रश्नको समाधान यथाशीघ्र एकता महाधिवेशन आयोजना गरेर त्यसैबाट खोजौँ ।’
प्रचण्डले जवाफ दिनै पर्ने ओलीका यस्ता ३ प्रश्न
ओलीले प्रचण्डले पेश गरेको प्रस्तावको जवाफ दिँदै थप गम्भीर प्रश्न समेत गरेका छन् । ओलीले प्रचण्डले कहिलै पनि जनयुद्धका घाइते र बेपत्ताको बारेमा कुरा नउठाउने बताएका छन् । युद्धमा घाइते भएका तथा शरीरमा गोली र छर्रा बोकेर हिँडिरहेकाहरुको दुःखान्त तस्बिर प्रचण्डमा कहिल्यै नआएको प्रस्तावमा उल्लेख गरेका छन् ।
शनिबारको सचिवालय बैठकमा जवाफी प्रतिवेदन पेश गर्दै ओलीले प्रचण्डलाई गरे, ‘युद्धमा घाइते भएका, अझै पनि शरीरमा गोली र छर्रा बोकेर हिँडिरहेका साथीहरुको दु:खान्त तस्बिर आउँछ ? कहिल्यै यी साथीहरुलाई राहत र पुनर्स्थापनाको विषय एजेण्डा बनाउनु भएको छ ?’
त्यसैगरी ओलीले नियुक्तिमा पनि प्रचण्डमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । ओलीले प्रचण्डले आन्दोलनमा योगदान गरेका भन्दा पनि आफ्ना नजिककालाई नियुक्त गर्न सिफारिस गर्ने गरेको आरोप लगाएका छन् । ओलीले आफ्ना नाता सम्बन्धीले नियुक्त नलिएको बताउँदै मलाई परिवार र व्यक्तिगत लाभमा अल्झिनु छैन भनेका छन् ।
ओलीको प्रस्तावमा भनिएको छः ”म देशलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु, देश समृद्ध बन्छ भन्नेमा विश्वास राख्छु । त्यसमा योगदान गर्नुपर्छ भन्ने ठान्छु । यस भावनासँग सहमत नहुने, सधैभरि निराशा र कुण्ठामात्रै बोकी हिँड्ने तर कुनै नेता विशेषको नजिक भएकै कारण उसले नियुक्ति पाउनु पर्छ भन्ने कुरा उचित हुन्छ र ? मलाई नातावादको निराधार आरोप लगाउनु पूर्व तपाईंले एकचोटी आफैलाई नियालेर हेर्नु भएको भए हुन्थ्यो । तपाईंले गर्नुभएको सिफारिसमा आन्दोलनमा योगदान र त्याग गरेका मान्छे परेका छन् कि अन्य ?” ओलीले ‘मन्त्रिपरिषद् या राजनीतिक नियुक्तिमा भन्नुभएका सबै विषय अहिले सार्वजनिक नगर्ने भन्दै प्रचण्डमाथि थप प्रश्न समेत उठाएका छन् ।
त्यसैगरी ओलीले प्रचण्डको सम्पतिमाथि समेत प्रश्न उठाउँदै छानविन गर्न तयार हुन समेत चेतावनी दिएका छन् । ओलीले प्रचण्डले सम्पति नखुलेको धनलाई ल्याउन समन्वय गरेको, घरभेटीलगायत पैसा दिने ठेकेदारको कामको लागि दवाव दिने गरेको समेत आरोप लगाएका छन् ।
ओलीको प्रतिवेदन पढेपछि आम रुपमा आफ्नै नेतृत्वमा भएको जनयुद्धका घाइतेका शरीरबाट गोली र छर्रा निकाल्न प्रचण्ड तयार नभएकै हुन् त ? आन्दोलनमा योगदान गरेकालाई पाखा लगाउँदै दलाललाई नियुक्ति गर्न सिफारिस गरेकै हुन् ? के व्यक्तिगत सम्पति छानविनको लागि प्रचण्ड तयार छैनन् ? प्रचण्डमाथि प्रश्न उठेका छन् । यति गम्भीर प्रश्नको उत्तर प्रचण्डले कसरी दिन्छन् हेर्न बाँकी छ ।
नेपाल बन्द सकिएपछि विप्लवले बिज्ञप्ति जारी गर्दै निकाले यस्तो निस्कर्ष, जनतालाई दिए यस्तो सन्देश
प्रचण्डसँग गोप्य बैठक सकेपछि बाबुराम भट्टराईले गरे यस्तो ट्वीट, नेता कार्यकर्ता तरंगित
ओलीलाई कसले कसले दियो जेल हाल्ने चेतावनी ? बालुवाटारमा खैलाबैला